Abanye baqala ngeenkqubo ezidibeneyo ... ndiphela nabo - andinakukwenza
malunga neeprojekthi zewebhu kunye notyalo-mali
Abanye baqala ngeenkqubo ezidibeneyo ... Ndiyifeze nabo
14.5.2018 29.5.2018 Beraniste2 izimvo
Inqaku elinomdla? Wabelana ngayo nabahlobo bakhe
Ndiya kugqiba! Ekugqibeleni ndiphela = qalisa
Akathethi, "Ndiphelile"! I ngenene ukubhala "ukuba bayeke ', nto leyo okunene ndicinga ndiza kokuqala. I yayilala Kodwa, ndingumntu ngumtya enjalo kwakhona 🙂 Ukuba ufunda inqaku yam, ngexesha lokugqibela ... ukulungisa elishumi edlulileyo ... mna ukuba mnandi, uyakwazi kubhadula waya eli phepha iziphumo zonyaka 2017.
Ewe, ewe ndinekhompyutheni kwisikolo sokuqala, yaqala ukuba yinhle PP06Kodwa ke waqalisa ukusebenza lo intanethi, ngoko ndandikuthanda nje ledasčím umntwana. Kodwa ke kwakumnandi. Ndikhumbula ukuba vyklikával na ugqatso ndikwi- esikolweni apho utata wakhe wafundisa 30 ke iikhompyutha ukubaleka apho ke abathile kwabo iintengiso, apho imali laphalala athile kwafika itsheki ukuba umsebenzi US kwi sites abadala. Kodwa ngubani ongazange ahambe nayo. Ekugqibeleni, njengabanye abaninzi, andizange ndihlekise!
Bafuna ukubambisana nomntu onxulumene naye
Kule minyaka elishumi edluleyo, abaninzi baye batshintsha. Ngoku ngoku ndibukele abatsha abazama ukukwenza iphosa kwiindawo kwaye ekugqibeleni uyigqubuthe ngenxa yokuba ayenzi imali. Kodwa kutheni bayeka ngokukhawuleza kangaka?
Xa ndifunda igalelo labo, zeziphi iingxaki ezixazululwa, mhlawumbi kwenzeka kum. Abanye bendiza babhale ukuba bafuna ukuzityebi, abanye bakwenza imali, umntu owaneleyo ukondla. Masithi umntu isibongoza injongo "ngokwenza Affile ophilileyo" kwaye ibona ngendlela elula ishishini intanethi yaye ngaphezu Ucinga ukuba kusengqiqweni oko xa kukho into iinyanga.
Mhlawumbi ke, mhlawumbi akunjalo. Kodwa bangaphi na abo baphumeleleyo abachaphazelekayo?
Uzama u kusuka ekunene ukuya kwesobunxele kwaye imali ayiyi kuza
Ndichithachitha wonke umntu ozama ubuncinane. Ndineenqwaba zeengcamango endingazichitha ii-1 malunga nomnyaka, kodwa ngu-10x ngaphantsi kwam ndicinga. Kukulungele ukuhlambalaza kakuhle. Yingakho andikukhathaleli nje nge-e-shop kunye nento endiyibonayo kum. Ndifuna ukuzibona mna. Akukho nto ingcono kunokufumana i-junk enhle.
Kodwa yenza abanye abaninzi abantu ... kwaye benza okuphindwe kabini kunam, bachitha ixesha elininzi, ngoko kutheni baphela ekushiye konke baze baphelele kwiziko lofowuni?
Ndicinga ukuba kunokungenangqiqo kunye neethagethi ezizodwa zezinto zonke. Iminyaka elishumi elinesibhozo edlulileyo, ndagqogqa iphrojekthi enye ye-intanethi, kungekho xabiso. Kwaye ke? Isikolo, umsebenzi, umsebenzi omningi kunye no-msebenzi-msebenzi (ishishini langempela kunye nayo yonke into) Ndibuye ndabuya kutshanje. Kodwa ndaphendule amehlo enkqweni yonke.
Ngoku ndiyazi oko imali izuzwa ngumsebenzi. Ndifumene ukuba imali engenayo yinto enhle, kodwa omnye wabo akacebile. Nangona ingeniso kanye nje kufuneka ibe umthombo ephambili yengeniso, kwiminyaka elishumi elinesihlanu kamva, mna nabo kunokuba brake likaxakeka, ukuba nantoni na.
I-Poker yamnceda kakhulu
Xa kunjalo asebenza poker yaba umsebenzi yexesha elizeleyo, izinto ezininzi ndafunda khona. Kwaye ngoku ndiyakhumbula iminyaka emininzi kwiilafile. Isifundo esinomdla kakhulu kum nje sasilungiselela iinjongo ezifanelekileyo. Xa ndaqalisa nam 10 iidola kwaye ngaphezu kwesiqingatha nyaka, laya kuma imida ephezulu. Ndichitha ixesha elide ndihlalutya yonke umdlalo. Ndandifuna ukufumana ama-winn angcono kwisandla esadlala kunabanye abachasi. Ndandifuna ukwenza amatafula amaninzi kunokwenzeka nangona ingozi.
Ndakhe ndathi. Yintoni oyisidenge? On the imida udlala kunjalo ngenkankulu ahlale iitafile kuba NL1000 abantu abaninzi wadlala yaye nini, kangangokuba kwakungekho bangi buthathaka. I NL500 kakhulu kakhulu, kwaye ... kutheni apha ukuzama ukuba ukuwudlala 3 Iitafile iintsuku ezilishumi kumqolo, nge umdlalo yingozi liya kuba kanye willy-liqhubeke ukulandela ukuwa. Mna ke wabuya enxiba a amanqanaba ezimbalwa ngezantsi NL200, ndacinga ... itheyibhile omnye umfundi mihla kufuneka wenze bafakwa kuyo. Ndandisazi ukuba kubulela inkqubo VIP mnandi kakhulu ukusuka Pokerstars musa ukuba imali nokuba dollar enye, kwaye kunjalo cashbackách kwam iilitha mathathu ukuya akhawunti yaye ukuba mna kempit nice, ulindele kuphela isandla kakuhle, yaye amawaka ambalwa eerandi ngenyanga njengoko kungekho lihlazo.
Kwaye kwenzeka ntoni - yaqala ukuhamba njengebhotela.
Ukuba ndifuna umphumo ongcono, kufuneka ndisebenze ngaphantsi
Ukususela ngoko, ndisoloko ndathi ... oko andifanele ndiyenze ukwenza iziphumo ezingcono. Man sibhatele ntoni ukuze kube ngcono, kodwa ngokukodwa mna ndizilibala oluninzi into ukuyenza. Kwi poker kwakuthetha umdlalo omncinci, kungcono ukhethe kwaye umphumo weza. Ndisebenzisa isicwangciso esifanayo sokungasebenzi nakwi-equity. Ndiya kufana nokuthengwa kwamagaraji. Ngokufanayo, ndiqwalasele i eShop, nto leyo ngokuqinisekileyo akazami ukuba inkulu kunye turnovers ke into yokugqibela Ndicinga. Ngoku, ngokwale isicwangciso ukurhweba forex ... indawo yokugqibela, ndiyacinga wavula kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo kwaye nkqu wathinta. Ngomoya ofanayo, ndiphosa umanyaniso kwaye ngoko ndiyakwazi ukuqhubeka.
Kwaye ngoku ekugqibeleni ndiyidelele
Xa ndabuyela kwi-tolin emva kwale minyaka, andizange ndibuyele ukukhangela imali elula. Ndaphuma emsebenzini kwaye ndaqala ukwenza ishishini. Ngokuqinisekileyo ndaqala ukusebenza kwaye andizange ndifike nazo naziphi na iindlela ezimfutshane malunga nendlela yokuphepha ukuphazamiseka. Ndiye ndabuya ukususela ekuqaleni ndaza ndakhela imali engenayo.
Kodwa asisayi kuba nobutyebi. Yimali yokuhamba ngokwabo, wonke umntu uya kuwufuna, kwaye kungenxa yoko akulula. Kuze kube nanamhla, andiyiyo yonwabile kuyo yonke imeko yangoku. Ibhizinisi eliphambili ngumthombo wemali engenayo, kwaye ndihlehlise ukusuka apho. Yaye imali egcinwe kwisitokisi, i-real estate, iibhondi, izatifikethi zotyalo-mali ekugqibeleni zithwala into kwaye ndinokuphefumula ngakumbi.
Kwaye xa ndithatha umoya omnye ngokuhlwa, ndithi .... kwaye kwakhona uphinde ujonge loo mbambano. Ngoku kuya kwenzeka!
Inzuzo evela kumntu othile phakathi kwoshishino kunye notyalo-mali
Kwaye ngokwenene. Xa ndifumanisa ukuba kunzima kangakanani umsebenzi, kwaye xa ndifumanisa kwakhona ukuba umsebenzi onzima ukwakha ingeniso engenayo kwiimpahla eziqhelekileyo, Ndandinomntu onzima kakhulu kunye onzima ongenakwenzeka.
Ngoko ndabuza umbuzo ... Ndimele ndithathe iingu-80 ukuya kwelinye iilitha kwindawo ethile yokuthenga enye igaraji eya kundithatha ilitha ngenyanga. Oku kuhle, yinyaniso. Kodwa ngekhulu lemitha ndiza kuba nako ukufaka amanqaku ubuncinane kwiiprojekti ezincinci ze-5 okanye iphrojekthi enye enkulu kunye neyinyanga ngenyanga? Njenge-bitch.
Ngokukhawuleza emva kwakho konke, akubonakali njengengqondo oyisicwenge. Ndinezinye iinkampani eziphathekayo ezikwazi ukuphosa malunga neendleko. Ezinye zazo zenziwa kwi-1 imini yokusebenza, kwaye enye ilitha enye eyayifumana kwaye yazuza ngenyanga. Ndiza kuba nexesha elingakanani lokwenza igaraji? ... ngoku, ayiyi kuba yimini.
Ngokwemvelo, akukho nto kulula, kwaye ukuba ndagqiba kwelokuba ndiphandle idibaniselwano kwaye ndizame ukufumana imali eninzi rhoqo, kuya kuba yinkathazo eninzi. Kwaye ukuba ndifuna ukuyidla? Andifuni ukunyusa umntu ochaphazelekayo! Ngenxa yokuba ndibhale apha - kunokwenzeka ukwenza imali eninzi ngokwenza izinto ngokwakho. Kodwa thabatha njengenye yeentlobo ezininzi zeengeniso, yakha i-web smartly ngoko ayifuni nayiphi na isondlo esongeziweyo, kutheni ungabi. Emva kwakho konke, kwanele ukuphonsa enye intambo enjalo kwikota yonyaka kwaye iya kupakishwa.
Ekugqibeleni, indoda ayinakuyenza yedwa. Ukuphosa umanyaniso Unokungena kwisayithi kwaye ufumane into eqediweyo ngemali embalwa. Ingaba ikho enye into ukwenza omnye Affil emva kwenye uze ugcine intloko yakho block gawula, kusenokungabi ukuphuma, kuya kuba bengenanto yokuhlawula irenti yaye ngenye uqhuba kakuhle klídečku, ngokuthe ngcembe de, xa umntu emva kweminyaka ukubona indlela kangakanani uyongena .
Ukuba unomdla, unako ukuzama yethu kakuhle kwinkqubo yokubambisana ... nceda nceda ucebise kwaye wenze kakuhle. Ukuba ubhala, ndiya kukuxelela indlela yokuphumeza iziphumo ezifanelekileyo ... ngonaphakade.
Ukuba ucinga ukuba unomnqweno oqinileyo kwaye unelisekile isigulane, unokuzama le khosi. Esi sikhokelo esinokukubeka kwintsimi ye-intanethi ngokugxininisa kwi-affiliate kunye ne-SEO. Kubaqalayo, yinto efanelekileyo yokufunda indlela yokukhawuleza ngokukhawuleza ukukhuphela isayithi lakho leWindowsPress kwisithathu sokuqala lekhosi, ekwabandakanya le bhulogi elula.
Nxulumane Fantasyobchod.cz - Zama inxaxheba kwiprogram evela kwi-FantasyShop - sineencwadi ezingaphezulu kwe-10260, imidlalo, iimpendulo kunye neengubo ezingcolileyo ...
Isikhangiso siya kubonakala njani?
Nasi isikhangiso sakho sinokuphela ngonaphakade kwi-299 CZK kuphela
Jonga ifomu lokuthenga
Okungakumbi kwi-site yam
Unyaka we-1 wobudlelwane esasemva - sasiwa njani?
Ukubuyiselwa kwe-Affilbox.com - Yiyiphi i-Return to Initial Investment?
Ababambisene nabo, ngaba uyazi abantu abanamathandle abo abayithandayo kwaye abathandi ukuwapheka?
Abathengisi abachaphazelekayo ngokusebenzisa iPCC ukukopela njengoko unako! Ngaba bacinga ukuba siya kubahlawula?
Iinkqubo zokubambisana njengengeniso-mali engenayo imali
2. unyaka kunye ne-Affilbox - inxulumene nexabiso elincinci kune-imeyili?
yebhokisi yefowuni, umanyaniso, kudibanisa
Inqaku langaphambili ngeposi Previous:
Ukubhala zonke ezilishumi kumgca - ikhosi eyokukwenza izigidi
I-6 yezicwangciso zokubambisa ngokuzenzekelayo kwi-ROAS kunye neCPA kwi-Google Adwords
Iingxelo ze-2 "Abanye baqala ngeenkqubo ezidibeneyo ... Ndiyifeze nabo"
Kamil Staš wabhala wathi:
15.5.2018 (20: 33)
Inqaku elihle, linyani. Ngulo kuphela igama eliza kuphuma uninzi lwe-crunching.
Beraniste wabhala wathi:
16.5.2018 (22: 17)
🙂 Kodwa inokuvusa inzululwazi ...
Yongeza izimvo Rhoxisa impendulo
Idilesi yakho ye email aziyi kupapashwa. ebiziwe ibhalwe *
Yakho imbono *
Ukuthengiswa okunamandla kwi-Intanethi kwi-Favi.cz - iingxaki ze-17 ofuna ukuzixazulula kunye nezigidi zize ziqokelele
I-Affilibho kunye ne-3.rok kunye naye! Amaqabane asebenzayo aphakama, ajika
Ngaba uke watshela i-PPC okanye omnye umakethi: "Kodwa mnumzane, kufuneka uhlale phantsi ..."
Ngaba ufumana imali engenayo? Ndiyakunceda uqalise.
Amaholide xa ivaliwe ezitolo. Ngaba unalo okanye unxamnye nalo?
I-10.000.000 yeeyure ze-5 esebenza kwi-Google Adwords ngaphandle kweengcali ze-PPC! Ngaba oko kwenzeka?
Disemba 2018 (1)
Septemba 2018 (1)
Agasti 2018 (1)
Ngamana 2018 (2)
Fe bruwari 2018 (3)
Oktobha 2017 (2)
Ngamana 2017 (1)
Matshi 2017 (5)
Fe bruwari 2017 (4)
Ja nuwari 2017 (5)
Disemba 2016 (2)
Oktobha 2016 (3)
Septemba 2016 (6)
Agasti 2016 (6)
Julayi 2016 (1)
AdWordsyebhokisi yefowuniumanyanisokudibanisaizabeloiimpahlabezrealitky.czBKEzokhuselekocopywriting.czUsuku lokuthumela ngokukhululekaimeyilikampaneemailkampane.czemail marketingsoftware yokuthengisa i-imeyilefacebookIikhampani ze-FacebookFacebook ukuthengisaigaraji njengotyalo-maliHeureka.czUsuku lokuthumela i-HeurekaHeureka ukuthunyelwa kwamahhalautyalo malintengisourhweboukwenza imalinewsletterukuthenga igarajiukuthenga imoto esetyenziswayoengenayo imalishishinibuqhetsebai-sub-article advertisingnkampaniPPCPPC ishaukuqasha indluukuqeshiswa kwezindlu zangaphandleabaphulaphuli kwiimeyileyo kugcinasklikAbadlali bezentlaloKhuphiswanoyokonga isakhiwoukulahlekelwa kweshishini
© 2019 Akusebenzi | ThemePress Theme: Nyukliya yiCrestaProject.
Le sayithi isebenzisa ikhukhi ukubonelela ngeenkonzo, ukwenza ngokwezizentengiso kunye nokuhlaziya i-traffic.
Indlela efanelekileyo yokuqala ukufumana imali kwi-intanethi ukuqala inkqubo ye-intanethi - ubhalise ngoku ngokukhululekileyo!